Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo oo la kulmay Musharaxiintii la tartantay[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo oo la kulmay Musharaxiintii la tartantay[Sawirro]
MUQDISHO – Madaxweynaha Federaaliga ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la kulmay qaar kamid ah musharaxiintii uu kaga guuleystay tartankii Doorashada Madaxweynaha ee ka dhacday 8 Febraayo magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha ayaa casho sharaf ugu qabtay hotel Al-Jazeera ee magaalada Muqdisho ,waxaana ka qeybgalay musharaxiinta tiradoodu kor u dhaafaysay tobanaan.
Ujeedada kulanka ayaa ahaa sidii looga wada shaqeyn lahaa Qaranimada Soomaaliya iyo xaalad kasta lagu wajaho wadajir.
Madaxweyne Farmaajo ayaa uga mahadceliyey musharaxiinta sida ay u aqbaleen casumaadiisa,wuxuuna sheegay in ay ka go’an tahay ka miro dhalinta qorshihiisa uu kusoo bandhigay Baarlamaanka hortiisa,kaasoo hal ku dig u ahead nabbed iyo nolol.
Waxa uu ku ammaanay musharaxiinta uu kulanka la qaatay taageeradii ay u muujiyeen ,wuxuuna sheegay in mar alba uu u baahan yahay taladooda iyo taageeradooda uuna soo dhaweyn doono.
Musharaxiintii tartanka looga adkaaday ee kulanka ka qeybgalay ayaa sheegay iney ku faraxsan yihiin casumaadda Madaxweyne Farmaajo ,waxay kaloo ballan qaadeen in ay la shaqeyn doonaan Madaxweynaha cusub si hawlaha horyaala ugu guuleysto.